Thursday July 02, 2020 - 17:52:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaraxyo iyo iska hor'imaadyo maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa sababay dhimashada 10 qof, war rasmi ah oo kasoo baxay taliska Booliska magaalada caasimadda ah ayaa lagu sheegay in isku dhacyo khasaara dhaliyay ay maanta dhaceen.
Getu Argaw oo ah taliyaha booliska Addis Ababa ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay ay sababsadeen qaraxyo iyo dhagxaan sida uu hadalka udhigay wuxuu iska fogeeyay in ciidamada boolisku ay dad shacab ah toogteen.
Magaalada Aadamo ee caasimadda u ah ismaamulka Oromada dadka dibad baxyada wada ayaa lawareegay fagaarayaasha waxayna burburiyeen xarumuhii dowladda.
Dhinaca kale mudaaharaadyo ka dhan ah nidaamka Abiy Axmed ayay taageerayaasha mucaaradka qowmiyadda Oromada ka oogeen dalka dibaddiisa.
Fagaaraha Wimbledon ee magaalada London ee caasimadda Ingiriiska ayay dad caraysan ku burburiyeen sanam taalla ah oo loo dhisay Xayle Salaase boqorkii hore ee Xabashida Itoobiya.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa isna ka dhacay dibad baxyo ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen taageerayaasha Jowhar Muxamed oo shalay ay xireen ciidamada Booliska Itoobiya kuna eedaysan abaabulidda dibad baxyada rabshadaha wata.
Dadka indha indheeya arrimaha siyaasadda Itoobiya ayaa sheegaya in kacdoonnada socda ay ka weyn yihiin dilka fanaankii caanka ahaa islamarkaana ay hiigsanayaan isbedel guud oo dalka ka islaaxa wadanka, dhammaan mucaaradka Xabashida Itoobiya ayaa isku raacsan in lamaja xaabiyo Abiy Axmed oo ay u arkaan khaa'in.